के तपाई साच्चै सफल व्यक्ति बन्नका लागि योग्य हुनुन्छ त ? यसरी थापाउनुहोस - Sakaratmak Soch
के तपाई साच्चै सफल व्यक्ति बन्नका लागि योग्य हुनुन्छ त ? यसरी थापाउनुहोस
सपना देख्नु ठुलो कुरा होइन तर देखेको सपनालाई पुरा गर्न सक्नु चाहि एकदमै ठुलो कुरा हो । अहिलेको समयमा हरेक व्यक्तिले सफल हुने सपना देख्ने गर्दछ । तर यहाँ कमैले मात्र देखेको सपना पुरा गर्ने गर्छन् । सफल हुनको लागि सोचेर मात्र बसेर हुदैन । आफुलाई सफल हुनको लागि त्यसको योग्य पनि बनाउन सक्नुपर्दछ । काम गरेर एकै दिनमा सफलता प्राप्त हुदैन ।यसको लागि समय लाग्दछ । किनकि सफलता कुनै जादु हैन कि छडी घुमायो र सफल भयो । आफुलाई सफल बनाउनको लागि यति धेरै काम गर्ने गर्नुहोस र आफुलाई यति धेरै व्यस्त राख्ने गर्नुहोस कि तपाईलाई अरुको कुरा गर्न र कुरा काट्न फुर्सद नै नमिलोस् । जीवनमा सफल हुन जरुरि छ । जब तपाई सफल बन्नुहुन्छ तब तपाइको भेट पनि उत्कृष्ट व्यक्तिहरु संग हुने गर्दछ । त्यसले तपाईलाई हौशला पनि प्रदान गर्ने गर्दछ ।
के तपाई साच्चै सफलताको लागि योग्य हुनुन्छ त ?
जीवनमा कुनै पनि निर्णय लिदा छोटो समयलाई मात्र फाइदा हुने निर्णय नगर्नुहोस । किनकि यसले तपाईलाई सफल हुन् कति पनि मद्दत गर्दैन । छोटो समयको फाइदा कहिल्यै पनि हेर्ने नगर्नुहोस । ठुलो सफलता हात पार्न चाहनुहुन्छ भने लामो समयको लागि हुने निर्णय लिनुहोस् । जुन निर्णयले तपाईलाई भोलिको दिन र आउने १५ बर्षको दिनमा सफलताको चुचुरोमा पुर्याउन सहयोग पुर्याउदछ ।
पैसाको बढी महत्व दिने व्यक्तिले सुरुमा सन्तुष्ट हासिल गर्ला तर ऊ त्यसमै अल्झिरहन्छ । त्यसैले आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई पनि ध्यानमा राख्ने गर्नुहोस । पैसालाई भन्दा बढी त्यो कामले तपाईको जीवनलाई पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुहोस । मानिसहरु कहिल्यै पनि पैसामुखी बन्नुहुदैन । यदि तपाइले पैसालाई मात्र बढी महत्व दिन थाल्नु भयो भने तपाइँ आफ्नो नातेदारहरुलाई पनि बिर्सन सक्नुहुन्छ । कामलाई प्राथमिकता दिनुहोस र परिवारलाई पनि समय दिने गर्नुहोस ।
समयलाई पर्खेर बस्ने व्यक्ति पछाडी रहन्छ । त्यसैले आजलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुहोस । सम्झिनुहोस, हरेक व्यक्तिसंग दिनमा २४ घण्टा हुन्छ र अगाडी त्यो व्यक्ति मात्र बढ्छ जसले २४ घन्टाको सदुपयोग गर्न जानेको हुन्छ । किनकि सफल हुने व्यक्तिको यो पनि एउटा खुबी होकी उसले आफ्नो एक दिनको समयलाई कसरि सदुपयोग गर्दछ । सफल व्यक्तिले एक मिनेटको पनि महत्व राख्ने गर्दछ । त्यसैले आफुले गर्ने कामको समय तालिका बनाउने गर्नुहोस । समयतालिका अनुसार काम गर्नु भयो भने तपाईलाई काम गर्नका लागि कुनै समस्या पनि हुदैन ।
अरुले धकेलेर अगाडी बढ्ने, या अरुको सहायताले अगाडी हिड्ने व्यक्ति धेरै टाढा पुग्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो लक्ष्यको आधार आफै निर्माण गर्नुहोस । अरुले रोपिदिएको रुखको फलमा जीवन नाबिताउनुहोस् । आफ्नो बिरुवाको लागि आफैले बिउ रोप्नुहोस र बिरुवा हुर्कौनुहोस । किनकि आफुले मिहेनत गरेको काममा एउटा आफ्नोपनको छबी रहेकोहुन्छ जसलाई हर कोहिले माया पनि गर्ने गर्दछ । आफुले कमाएको पैसा र अरुले दिएको पैसा खर्च गर्ने हो भने आफुले कमाएको पैसा कम खर्च गरिन्छ किनकि आफुले दुख गरेर कमाएको पैसा मास्न कसैलाई पनि मन हुदैन । सफल हुन पनि आफैले बाटो बनाउनुपर्दछ । बाटोमा आएका बिभिन्न अफ्ट्यारा परिस्थितिहरुको आफैले सामना गर्न सिक्नुपर्दछ ।
सधै उही स्थानमा मन पराउने र नयाँ कुरा गर्न डराउने व्यक्तिले ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्नुहोस । त्यहि अनुसार आफुमा र आफ्नो काममा आवश्यक परिवर्तन पनि ल्याउनुहोस् । यदि तपाइँ नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ भने यसको मतलब तपाईको ज्ञान पनि अझ धेरै बढ्छ । आफ्नो ज्ञान, बुद्दी, बिबेकलाई जति बढाउँ सक्यो आफुमा त्यतिनै बढी आत्मशक्तिको पनि विकास हुदै जान्छ । यसले गर्दा तपाइँ जुनसुकै ठाउमा गएर पनि निर्धक्क संगले बोल्न सक्नुहुनेछ ।
अरुको इर्ष्या गर्ने व्यक्ति आफु चाहे अनुसार अगाडी बढ्न सक्दैन । काममा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नुहोस । काममा अरुलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहोस । सबैलाई समान रुपले ब्यबहार गर्नुहोस । सधै आफ्नी अनुहारमा मुस्कान राख्नुहोस । हसिलो अनुहारले पनि तपाईलाई आत्मबल प्रदान गर्दछ । सबै संग राम्रो बानि व्यहोराले सम्बन्ध अघि बढाउने गर्नुहोस । तब तपाईलाई पनि उनीहरुले अगाडी बढ्न मद्दत गर्दछन । संगत त्यसैको गर्नु जसले तपईलाई अगाडी बढ्न सदैव हौशला प्रदान गरिरहन्छ । तपाइको कमि कमजोरीहरुलाई सुधारिदिन्छ ।
काम आउँदिन, गर्दिन भन्ने व्यक्तिले आफ्नो सिप र क्षमताको विकास गर्न सक्दैन । त्यसैले कामको लागि आएको प्रस्तावलाई अवसरको रुपमा लिनुहोस् । काम गर्दा आफ्नो काम सक्नुलाई मात्र कर्तब्य मान्ने व्यक्तिले काममा उत्कृष्टता हाशिल गर्न सक्दैन । त्यसैले कामको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुहोस । तपाई जति धेरै काम गर्नुहुन्छ त्यतिनै धेरै तपाइँमा उर्जा पनि थपिदै जान्छ । कामले नै मानिसलाई सफलताको शिखर चुम्ने बाटो देखाउदै जान्छ ।
गल्तीलाई नजर अन्दाज गर्ने व्यक्तिले थप अरु केहि पनि सिक्न सक्दैन । आफुले गरेको होस वा अरुले गरेको होस्, गल्तीलाई सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुहोस । त्यो गल्ति के कारणले भयो ? के हुनुपर्ने थियो ? त्यो गल्तीले कस्तो परिणाम ल्यायो र त्यो गल्ति फेरी हुन नदिनको लागि के गर्ने ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुहोस ।
सबैलाई खुसि बनाउन खोज्ने व्यक्ति सफल हुन सक्दैन । थोरैलाई खुसि दिनुहोस तर धेरै खुसि दिनुहोस । मानिसले आफ्नो काम र आफ्नो बारेमा आलोचना गर्छन् भने गर्न दिनुहोस । त्यो आलोचना बाट कदापि पनि नडराउनुहोस् । सबै अरुले चाहे जस्तै गर्नुभयो भने तपाई तपाई जस्तो कहिल्यै बन्न सक्नुहुन्न ।
तपाईलाई हाम्रो यो प्रेरक जानकारी कस्तो लाग्यो । हामीले यहाँ तपाई सफल हुन योग्य हुनुन्छ कि हुनुन्न ? यदि हुनुन्न भने तपाइले के-कस्ता काम गर्ने र नगर्ने भन्नेबारे चर्चा गरेका छौ । यदि तपाई आफ्नो करियरमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आशा छ कि हामीले माथि चर्चा गरेका कुरा तपाई पक्कै पनि आफ्नो जीवनमा लागु गर्नुहुन्छ ।